हात्तीपाइलेको औषधिमा शंका गर्नुपर्दैन, ढुक्क भएर खानुहोस् : डा भीम आचार्य
फागुन १२, २०७४ शनिवार १३:५४:०० प्रकाशित
स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अाजदेखि तीन दिनसम्म हात्तीपाइले रोग विरुद्धको निःशुल्क औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० भित्र विश्वबाट हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार नेपालमा पनि सन् २००३ देखि हरेक वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्धको निःशुल्क औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। हात्तीपाइलेको औषधि वितरण अभियानका विषयमा प्रवीण ढकालले महाशाखाका निर्देशक डा भीम आचार्यसँग गरेको कुराकानीः
हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने तयारी कस्तो छ? कुन कुन जिल्लामा हुन्छ कार्यक्रम ?
सबै तयारी पूरा भएको छ। अाजबाट तीन दिनसम्म २४ जिल्लामा औषधि खुवाउने काम हुन्छ। यी जिल्लाका ९१ लाख जनसंख्यालार्इ औषधि खुवाउने लक्ष्य छ। यसकालागि अावश्यक औषधि, जनशक्ति खटिइसकेका छन्। नेपालका ६१ जिल्ला हात्तीपाइले रोगको जोखिमयुक्त जिल्लामा पर्छन्। तीमध्ये सबै जिल्लामा विभिन्न चरणमा गरी औषधि खुवाइने कार्यक्रम चलिसकेको छ। जसमध्ये ३७ वटा जिल्लाका कार्यक्रम फेजआउट भइसकेका छन्। हात्तीपाइले रोगको प्रसार दर (प्रिभिलेन्स रेट) १ भन्दा कम भएकाले ३७ जिल्लामा औषधि खुवाउने कार्यक्रम फेजआउट भएको हो। यी जिल्लालाइ जोखिममुक्त जिल्ला भनिन्छ।
रोगको प्रिभिलेन्स दर १ भन्दा कम भएमा उक्त क्षेत्रलाई निवारणउन्मुख क्षेत्र भन्न सकिन्छ। तर प्रिभिलेन्स दर १ भन्दा माथि रहेका २४ वटा जिल्लामा यो वर्ष औषधि खुवाइन लागिएको हो। ती जिल्ला पाँचथर, ईलाम, झापा, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, उदयपुर, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दैलेख, दाङ, बाँके, बर्दिया, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर हुन्।
तीन दिने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन ती जिल्लाका हरेक गाउँगाउँ र टोलटोलमा सबैको पायक पर्ने स्थानमा बुथ राखेर औषधि खुवाउने काम हुनेछ। औषधि सेवन तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो दिनमा भने घरदैलो कार्यक्रम हुनेछ। औषधि खान कोही पनि नछुटुन् भनेर स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकहरुले घरघरमा गएर औषधि खुवाउनेछन्। स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकहरुलाई औषधि खुवाउने सम्बन्धी तालिम लिने काम र अन्य तयारी पूरा भइसकेको छ।